Sida Loo Bilaabo Maalgelinta Lacagta Markii Ugu Horreysay - The Wealth Circle
Bogga ugu weyn Sida Loo Bilaabo Maalgelinta Lacagta Markii Ugu Horreysay
Sida Loo Bilaabo Maalgelinta Lacagta Markii Ugu Horreysay
Isha sawirka: ToughNickel
Barashada sida lacagta loo maal galiyo waxay noqon kartaa mid adag, laakiin way ka sahlan tahay sidaad u malaynayso, waxaadna bilaabi kartaa iyada oo aan loo eegin inta lacag ah ee aad kaydsatay. Markaa runtii waxay igu qaadatay cilmi-baadhis iyo daraasad si aan u barto sida loo maalgeliyo lacagtayda. Waxa aan bartay waa runtii waxa aan halkan ku tusi doono.
Maxaad u maalgashanaysaa?
Haddii aad rabto in kaydkaaga uu u kordho wakhti ka dib, waa inaad maalgelisaa. In kasta oo ku-haynta lacagta akoonnada kaydka ahi ay u muuqato sharad badbaado leh, dulsaarka aad kasban doontaa kuma filna inaad la socoto sicir-bararka tobannaan sano.
Iyadoo ay khatar badan tahay muddada gaaban, suuqa saamiyada wuxuu bixiyaa soo-celin isku-dhafan oo aan la socon oo kaliya laakiin sicir-bararka ka sarreeya muddada dheer. Haddii aad wakhti qaadato si aad u fahamto sida kobaca isku xidhku u shaqeeyo, waxaad si dhakhso ah u ogaan doontaa sababta ay tahay inaad isla markiiba u bilowdo maalgelinta.
Ka soo qaad inaad heshay dhaxal yar oo aad go'aansatay inaad maalgashato - haddii aad $5,000 ku shubto akoon leh 7% dulsaar oo aad ku darsato $200 dheeraad ah bishiiba 30 sano, waxaad yeelan doontaa in yar oo ka badan $284,000.
Halkee la maalgashan karaa - Meelaha ugu Wanaagsan ee aad Lacagtaga Dhigto
Maaliyadda shakhsi ahaaneed waa taas: shakhsi ahaaneed. Sida ugu fiican ee aad lacag u maal gashan karto way ka duwanaan doontaa sida ugu fiican ee aan lacagta u gelin karo.
Waxyaabaha qaar, dhanka kale, waa caalami. Qof kastaa waa inuu meel u dhigaa lacagta hawlgabka oo aanu taaban doonin tobanaan sano. Marka aad ku jirto labaatan ama soddonaad, way adkaan kartaa inaad aragto baahida loo qabo qorshaynta hawlgabka.
Laakiin waxaan u baahanahay inaan ka fikirno nafteena mustaqbalka, iyo badbaadinta lacag nagu filan si aan ugu noolaano nolol raaxo leh xilliga hawlgabka waa hawl adag. Marka hore ee aad bilowdo maalgelinta, way fududaan doontaa.
Si aad u ogaato sida loo maal galiyo lacagta, waa in aad marka hore go'aamisaa meesha aad dhigi lahayd lacagtaada (eeg liiskayaga buuxa ee maalgashiga ugu fiican ee da 'kasta ama dakhli kasta).
Hadafkaaga iyo rabitaankaaga inaad qaadato khatar badan oo aad ku beddesho abaal-marinaha maalgashiga ee sare ayaa go'aamin doona jawaabta. Kuwa soo socda waa tusaalayaal maalgashi guud:
Kaydka: Saamiyada shaqsiga ah (saamiga shirkad) oo aad aaminsantahay in ay qiimeeyaan qiimaha.
Bonds: Bonds waa nooc deyn ah oo u ogolaanaya shirkad ama dawlad inay lacag kaa amaahdaan si aad u maalgeliso mashruuc ama dib u soo celinta deynta kale. Bonds waa maalgashi dakhli go'an oo si joogta ah u bixiya dulsaarka maalgashadayaasha. Taariikhda biseylka ee hore loo go'aamiyey, maamulaha waa la soo celinayaa. (Wax badan oo ku saabsan curaarta ka baro halkan.)
Maalgelinta labada dhinac: Maalgelinta maalgelinta, sida maalgelinta wadaagga ah, miisaaniyada index-ka, ama miisaaniyada sarrifka-ganacsiga (ETFs), waxay kuu oggolaaneysaa inaad iibsato tiro badan oo kayd ah, curaarta, ama maalgashi kale hal mar. Marka la isu geeyo lacagta maalgeliyaha oo loo isticmaalo in lagu iibsado dambiil maalgashi oo la jaan qaadaya yoolka sanduuqa la sheegay, maalgelinta labada dhinac waxay abuurtaa kala duwanaansho degdeg ah. Lacagaha si firfircoon loo maareeyay, kaas oo maareeye xirfadle ahi uu ku dooranayo maalgelinta, ama maalgelinta raadraaca tusmaynta, ee raacaya tusmaynta. Tusaale ahaan, Sanduuqa tusmada ee Standard & Poor's 500 waxa uu hayn doonaa 500 oo ka mid ah shirkadaha waaweyn ee dalka.
Guryaha guryaha: Kala duwanaanshaha faylalkaaga maalgelinta ee ka baxsan isku dhafka dhaqameed ee saamiyada iyo curaarta waxay suurtogal u tahay hantida maguurtada ah. Uma baahnid inaad guri gadato ama aad noqoto hantiile si aad u maal gashato hanti ma guurto ah. Waxaad ku maalgelin kartaa REITs, kuwaas oo la mid ah maalgelinta wadaagga ah ee hantida ma-guurtada ah, ama iyada oo loo marayo goobo maalgashi oo hanti ma-guurto ah oo online ah oo maalgeliya maalgeliyayaasha.
Hagaha Tallaabo-tallaabo ee Hababka ugu Wanaagsan ee Lacagta lagu Maal-gelin karo
Qof kasta xaaladdiisa dhaqaale waa ka duwan tahay. Istaraatiijiyada maalgashiga ugu fiican waxaa go'aamiya dookhyadaada gaarka ah iyo sidoo kale duruufahaaga maaliyadeed ee hadda iyo mustaqbalka. Markaad abuureyso qorshe maalgashi oo hufan, waa muhiim inaad si fiican u fahanto dakhligaaga iyo kharashaadkaaga, hantida iyo deymaha, masuuliyadaha, iyo yoolalkaaga.
Kahor intaadan bilaabin maalgashiga, hubi in inta ka hartay gurigaaga maaliyadeed uu hagaagsan yahay. Waa inaad:
U fududee miisaaniyadaada bilaha ah - inta aad shaqeysato, kharash gareyso, oo kaydsato.
Gacanta ku hay deyntaada, adiga oo aan lahayn hadhaaga kaarka deynta dulsaarka sare iyo qorshe aad ku bixinayso deynta ardayga iyo deymaha kale.
U deji yoolal gaar ah waxa aad rabto lacagtaada si ay kuugu ogolaato inaad sameyso mustaqbalka.
Sideen ku bilaabi karaa maalgelinta lacagtayda sida saxda ah?
Waxaa jira goobo badan oo maalgashi oo aad ku maalgalin karto lacagtaada laakiin si ay kaaga caawiyaan inaad u bilowdo habka maalgashigaaga sida saxda ah, halkan waxaa ah hannaan shan-talaabo ah oo lagu go'aaminayo sida lacagtaada loo maalgeliyo sida saxda ah hadda:
Go'aami hadafyadaada dhaqaale, waqti xaddidan, iyo dulqaadka khatarta ah.
Go'aanso haddii aad rabto inaad adigu sameyso ama aad qorto qof kuu qabta.
Dooro inta u dhaxaysa 401 (k), IRA, xisaab dillaal ah oo la canshuuri karo, iyo koontada maalgashiga waxbarashada ee maalgashigaaga.
Dooro maalgashi ku habboon rabitaanka cuntada ee khatarta ah ( kaydka, curaarta, maalgelinta wadaagga ah, hantida ma-guurtada ah).
Samee akoon isticmaale Intee in le'eg ayaa lagu maalgeliyaa iyo halka lagu maalgelinayo
Intee in le'eg ayaan ku qasbanahay inaan maalgashado? Halkee ayaan maalgashadaa?
Bilowga: Waxaan haystaa wax ka yar $500 oo aan ku maalgeliyo Betterment
Dhexdhexaad: Waxaan haystaa in ka badan $500 oo aan maalgashado
Dhexdhexaadiyaha Sare ee Wealthfront: Waxaan haystaa in ka badan $1,000 oo aan maalgashado
M1 Maaliyadda Sare: Waxaan haystaa in ka badan $3,000 si aan u maalgeliyo Vanguard Digital Advisor
Wealthfront waa lataliye Robo oo aan aad ugula talinayo maalgashadayaasha markii ugu horeysay. Kharashkoodu waa macquul 0.25 boqolkiiba, laakiin qaybta ugu fiican ayaa ah in $5,000-kaaga ugu horreeya lagu maamuli doono lacag la'aan (gaar ah akhristayaasha MU30).
Wealthfront ayaa laga yaabaa inay noqoto dariiqa aad ku mari karto haddii aad raadinayso inaad ku bilowdo maalgelin lacag yar. Si aad u bilowdo Wealthfront, waxaad u baahan doontaa $500, markaa taas maskaxda ku hay. Markaad khibrad u hesho maalgashiga, waxaad dooran kartaa ETF-yada la hubiyay ama waxaad maalgelin kartaa qayb ahaan, sida tignoolajiyada, daryeelka caafimaadka, ama maalgashiga mas'uuliyadda bulsheed.
M1 Finance waa shirkad ku takhasustay adeegyada maaliyadeed.
Haddii aadan haysan $500 oo hadhaaga bilawga ah, booska la-talinta Robo ayaa wali kuu haysa fursado badan oo wanaagsan. M1 Finance kuma dalaco guddiyada ama khidmadaha maamulka, iyo hadhaaga bilowga ugu yar waa $100 oo keliya.
Waxaad ka dooran kartaa mid ka mid ah faylalka kala duwan ee horay loo sameeyay ama waxaad iska dhisi kartaa adiga oo isticmaalaya madalkooda si aad u iibsato saamiyada iyo ETF-yada. Interface-ka isticmaaluhu aad buu u fudud yahay in la isticmaalo.
Wanaajinta, oo aan lahayn hadhaaga bilowga ugu yar, waxaa laga yaabaa inay tahay ikhtiyaar wanaagsan haddii aad ku bilaabayso wax ka yar $100. Aad bay ugu fiican tahay kuwa bilawga ah, sida M1 oo kale, sababtoo ah waxay leedahay madal aad u fudud iyo hab aan dhib lahayn oo maalgashi. Intaa waxaa dheer, khidmadda maamulka waa kaliya 0.25 boqolkiiba.
Maalgelinta hantida ma guurtada ah
Hanti ma-guurto ah waxay sidoo kale noqon kartaa maalgashi wanaagsan. Si loo caddeeyo, degaankaaga aasaasiga ah waa inaan loo tixgelin maalgashi. Guryo ama dhismayaal ganacsi oo aad leedahay oo aad kiraysato waxaa loo tixraacaa maalgelinta hantida ma-guurtada ah. Awoodda maalgashiga hantida ma-guurtada ah waxay ku jirtaa qulqulka lacagta caddaanka ah ee kiraystayaasha, inkastoo badi hantida ma-guurtada ah ay qiimeeyaan sannado iyo tobanaan sano.
Lahaanshaha hantida ma-guurtada ah waxay dhalin kartaa dakhli aad geli karto jeebkaaga ama aad dib u maal galin karto haddii aad ka qaadi karto kiro ka badan inta aad ku bixiso amaahda guryaha, canshuuraha, iyo dayactirka.
Ma dabooli karno wax kasta oo jira si aan u ogaano maalgashiga hantida maguurtada ah ee maqaalkan, laakiin waxaa jira siyaabo aad si degdeg ah ugu bilowdo miisaaniyad yar. Laba goobood oo maal-gashi hanti ma-guurto ah, Fundrise iyo Roofstock, fursado maalgashi oo ilo badan. Waxaad maalgelin kartaa ilaa $5,000 oo waxaad la wadaagi kartaa faa'iidada ka soo baxda guryo waaweyn, dabaqyo badan ama dhismayaal xafiisyo kale.
Maalgelintani maaha khatar la'aan, khidmadaha ay qaadaan shirkaduhuna waxay yareeyaan soo celinta. Waxaa laga yaabaa, si kastaba ha ahaatee, inay soo jiidan karaan haddii aad rabto inaad kala duwanaato haysashada hantida maguurtada ah adoon dhib iyo kharash ku bixin iibsashada iyo maaraynta guryaha laftaadu.
Haddii aad leedahay dulqaad khatar sare leh oo caloosha ku iman karto, waxaad u baahan doontaa faylal ka kooban inta badan kayd ama sanduuqyo kayd ah. Haddii aad leedahay dulqaad khatar yar, waxaad u baahan doontaa faylal leh curaarta ka badan, maadaama kuwani u muuqdaan kuwo deggan oo aan degganayn. Hadafkaagu waxay muhiim u yihiin qaabaynta faylalkaaga, sidoo kale. Hadafka mustaqbalka fog, faylalkaagu wuxuu noqon karaa mid dagaal badan oo wuxuu qaadan karaa khataro badan - oo laga yaabo inuu keeno soo celin sare - markaa waxaad u badan tahay inaad rabto inaad yeelato saamiyo ka badan curaarta.
Jid kasta oo aad doorato, habka ugu fiican ee aad ku gaadhi karto yoolalkaaga dhaqaale ee mustaqbalka fog oo aad u yarayso khatarta waa inaad lacagtaada ku faafiso noocyo kala duwan oo hanti ah. Taas ayaa lagu magacaabaa qoondaynta hantida. Kadibna dabaq kasta oo hanti ah, waxaad sidoo kale u baahan doontaa inaad u kala beddesho maalgashiyo badan.
Qoondaynta hantidu waa muhiim sababtoo ah noocyada hantida kala duwan - saamiyada, curaarta, ETF-yada, maalgelinta wadaagga ah, hantida ma-guurtada ah - waxay uga jawaabaan suuqa si kala duwan. Marka mid kor u kaco, mid kale ayaa hoos u dhici kara. Markaa go'aan ka gaarista isku dhafka saxda ah waxay kaa caawin doontaa faylalkaaga isbeddelka cimilada ee suuqyada safarka si aad u gaarto yoolalkaaga.
Xaqiiqdu waxay tahay, uma baahnid inaad sugto ilaa aad deyn la'aan tahay ama aad haysato dhammaan lacagta si aad u bilowdo maalgashiga (xaqiiqda, waa inaadan!). Si kastaba ha ahaatee, haddii aadan hubin inaad diyaar u tahay inaad bilowdo maalgashiga, waxaan rajeynayaa in hagahan uu ku caawiyo.
Maxaan Ku Sameeyaa Lacagtayda? 10 Meelo Maalgelineed oo Cusub
Hagaha Bilowga ah ee Maalgelinta Suuqa Suuqa
Maalgelinta Lacagta Kanada | Tillaabo-Tallaabo Tusaha
Sida loo helo shatiga ganacsiga ee Wisconsin | Hagaha Buuxa
Dunida maanta qof walba wuu maalgashan karaa si ka duwan sidii hore oo maalgalintu loogu talagalay dadka hodanka ah iyo dadka…
Ma haysatid dhaqaale yar, oo rajaynaya isbeddel weyn? ROI had iyo jeer waa qodobka dhiirigeliya maalgashadayaasha cusub, halka…